Karamberriga | Cuntada Nutri
Cuntadan yari waxay ku dhex jirtaa guryo qurux badan oo waxtar badan u leh jidhka, qaniinyada yar ee macaan ee wax weyn ka tari kara caafimaadka.
Haddii aadan weli garanaynin waxtarka miraha karamberriga, sii wad akhriska xariiqyadan maxaa yeelay waxaan kuu sheegi doonnaa sida ay kuu daryeeli karaan ayna u horumariyaan caafimaadkaaga.
Waxay bixiyaan faa'iidooyin nafaqo oo muhiim ah taas nafaqo-yaqaannada aan laga iloobin. Mirahaas cas waxay leeyihiin dhadhan dhanaan laakiin sidoo kale waa macaan yihiin, in kasta oo miraha loo yaqaan 'blueberries' ee aan sida ugu fiican u naqaan uu yahay buluugga madow ee ku dhow madow.
Lingonberries waxay si toos ah xiriir ula leeyihiin dhibaatooyinka kaadiheysta la xiriira iyo infekshinka kaadidaSi kastaba ha noqotee, waxay naga caawin karaan dhinacyada kale ee guud ee caafimaadkeena.
1 Faa'iidooyinka karamberriga
1.1 Waxay ka hortagaan cilladaha kaadi-mareenka
1.2 Waxay yareysaa halista kansarka
1.3 Way cusbooneysiineysaa
1.4 Anti-barar dabiiciga ah
1.5 Waxay hagaajisaa aragga
1.6 Cunto ka hortagga dufanka
1.8 Waxay yareysaa cudurka macaanka
1.9 Waxay kordhisaa heerarka kalastarolka wanaagsan
1.10 Hawlahaaga garashada iyo xusuusta ayaa kordhi doona
Lingonberries waxay ku jahwareersan yihiin buluug iyagoo aaminsan inay isku dhadhamin doonaan, si kastaba ha noqotee, kuwani waa kuwo aad u dhanaan oo aashito leh. Muuqaalkeedu waa lamid yahay, keydinta faraqa midabka. Buluuga caadiga ah waa macaan oo buluug ah, marka lagu daro, si toos ah ayaa loo cabi karaa, dhinaca kale, kuwa casaanka ah ee dhadhankooda, waxaa loo qaadaa si diyaarsan.
Maaha wax caadi ah in laga helo dukaamada iyaga oo ah alaabo cusub, maxaa yeelay runtii maahan wax soo saar si xad dhaaf ah loo cuno. Si kastaba ha noqotee, dukaamada alaabada gaarka ah
Marka xigta waxaan kuu sheegeynaa side ayay karamberriga kuu caawin kartaa?
Waxay ka hortagaan cilladaha kaadi-mareenka
Way kufilan yihiin markay tahay ka hortagga ama yareynta infekshinka kaadi mareenka, tanina waxay ugu wacan tahay xaddiga badan ee antioxidants-ka. Waa inaanan ilaawin in buluuggan ay hodan ku yihiin tannins-ka oo bixiya faa'iidooyinka antibiyootigga ee naga caawiya kahortagga cudurka noocan ah.
Waxay yareysaa halista kansarka
Kansarku hadda waa mid ka mid ah cudurrada aadamuhu u baqo, wuxuu ku dhici karaa qayb kasta oo jirka ka mid ah iyadoo ku xiran hadba heerka horumarka uu yahay cudur dilaa ah.
Isticmaalka karamberriga, sida cuntooyin kale oo badan oo dabiici ah, waxaa loo isticmaali karaa hub looga hortago ka ilaali kansarka. Waxay ka caawineysaa la dagaallanka halista faafitaanka unugyada kansarka markay kuwani yar yihiin, marka lagu daro, ma dhaawaceyso unugyada intiisa kale.
Xarumaha ku jira lingonberries ayaa leh proanthocyanidins, walxaha qaarkood ee caawiya dhacdooyinka layaabka leh iyo guud ahaan caafimaadka. Waxay dib u dhigaan waqtiga gabowga maqaarka iyagoo baabi'inaya xagjirnimada lacag la’aanta ah iyo ficilkooda maqaarka. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad si fiican u aragto maqaarkaaga, ha joojin qaadashada qolofta.
Anti-barar dabiiciga ah
Cranberry wuxuu leeyahay xaddi badan oo antioxidants, iyo sidoo kale anti-inflammatory. Sidaa darteed, waxaa la sheegay inay faa'iido badan u leedahay yaree cudurada qaar sida calool bararsan, gaaska, qallafsanaanta, muruq xanuun, xanuunka caadada, iwm.
Waxay hagaajisaa aragga
Aragtida la socota waqtiga ayaa sidoo kale la kulmi kara xoogaa xumaansho iyo waxyeeleyn oksaydh ah, unugyada qaybta dambe ee isha ee kubbadda indhaha ayaa si fudud u dhaawici kara. Sababtaas awgeed, waxaan kugula talineynaa inaad cuntid karamberriga si anthocyanins-ka ay kaaga caawin doonaan inaad ka hortagto dhaawaca isha
Cunto ka hortagga dufanka
Haddii aad raadineyso inaad lumiso miisaanka, waxaad kordhin kartaa isticmaalka khudradda ku jirta cuntadaada. Waxay ka kooban yihiin faybar mana bixiyaan qiyaaso badan oo kalooriyaal ah. Midho caafimaad qaba inaad cuni karto si aad u nidaamiso shaqada xiidmaha waxayna kaa caawineysaa inaad dareento inaad ka dheregsan tahay waxtarka weyn ee fiber.
Waxay u dhaqmaan sida neuroprotective, maadada sare ee antioxidants. Intaa waxaa sii dheer, gallic acid wuxuu ku shaqeeyaa iyadoo la kordhinayo awooda nidaamka neerfaha.
Waxay ka hortagtaa cudurada sida Alzheimers, cudurka Parkinson taas oo si toos ah u saameysa horumarka dabiiciga ah iyo kan caadiga ah ee waxqabadka garashada.
Waxay yareysaa cudurka macaanka
Isticmaalka karamberriga ayaa naga caawin kara hagaajinta xasaasiyadda insulin ee dadka cayilan qaarkood kuwaas oo u adkaysta hormoonkan. Waxay la dagaalantaa cudurka macaanka waxayna jirka ka caawisaa inuu si sax ah u shiido carbohydrateska, sidaas darteed sidoo kale wuxuu ka hortagayaa sonkorta dhiigga inay si xad dhaaf ah u kororto.
Sidoo kale, waxay ka caawisaa ka hortagga dhiiga gulukooska dhiigga, hagaajinta jawaabta insulin ee jirka. Sidan oo kale, nafaqooyinka si wanaagsan ayaa loo qaadaa oo dhiiggu u wareegaa dhib la'aan. Ka hortagga ku soo ururinta kolestaroolka dhiigga iyo xididdada dhiigga.
Waxay kordhisaa heerarka kalastarolka wanaagsan
Sidaad ogtahay, way jiraan laba nooc oo kolestarool ah, HDL-ta wanaagsan, ama LDL-ka xun. Xaaladdan oo kale, karamberriga ayaa gacan ka geysanaya baabi'inta kolestaroolka xun iyo kordhinta heerarka kolestaroolka wanaagsan.
Hawlahaaga garashada iyo xusuusta ayaa kordhi doona
Si baaskiil Kordhi kartidaada garasho isku day inaad isticmaasho qaddar badan oo ah 'karamberriga', marka lagu daro, waxay kaa caawin doonaan inaad hagaajiso xusuustaada iyo awooddaada. Qaadashada miraha waxay sidoo kale u oggolaaneysaa hagaajinta geeddi-socodka waxbarashada iyo xusuusta guud ahaan.
Cranberries waa cuntooyin aad ka heli karto labadaba wax soo saarka dabiiciga ah, cabitaanada ama kaabsulka Si kasta oo aad u doorbideyso, hubi in miraha buluugga ah ay yihiin kuwa si dabiici ah u koray oo tayada ugu fiican leh maxaa yeelay sidan ayaa jirkaagu ugu raaxeysan doonaa cunno ay ku badan yihiin guryaha iyo faa iidooyinka jirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Nafaqeyn » Cranberry cas